कुमारी बैंकका संस्थापकले सेयरधनीले १३ हजार ४५० कित्ता सेयर बिक्री गर्दै, भाउ कति होला ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » कुमारी बैंकका संस्थापकले सेयरधनीले १३ हजार ४५० कित्ता सेयर बिक्री गर्दै, भाउ कति होला ?
काठमाडौं - कुमारी बैंकका एक जना संस्थापक सेयरधनीले १३ हजार ४५० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएका छन् । संस्थापक सेयरधनी कवि शाहले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्ने भएका हुन् । यो सेयरमा कुमारी बैंकका संस्थापक सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् । संस्थापकले नकिनेमा मात्र सर्वसाधारणले यो सेयर किन्न सक्नेछन् । सेयर खरिद गर्न इच्छुक व्यक्तिले सूचना सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र बैंकको कानुन तथा सेयर शाखा नक्साल काठमाडौंमा पुग्ने गरी आवेदन दिनुपर्नेछ । सेयरको मूल्य बिक्रेताले तोकेबमोजिम हुने बैंकले प्रकाशित गरेको सूचनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने कसरतमा रहेको कुमारीले काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, पश्चिमाञ्चल फाइनान्स तथा महाकाली र काँक्रेबिहार विकास बैंकलाई एक्वायर गरि एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ छ । हकप्रद र लिलामी सेयर बिक्री भएपछि भने बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४९ हजार ७९७ रुपैयाँ भएको छ । तेस्रो त्रैमासमा कुमारीले ३७ करोड ५८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २४ रुपैयाँ ६४ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३५ रुपैयाँ १ पैसा छ ।